Inhloko ZeNdaba Lwezi 24, 2021
Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu-133,707 asebahlaselwa yiCoronavirus lokhe lolubhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Kuthi abasindayo ngemva kokuhlaselwa yilumkhuhlane bayedlula inkulungwane ezilikhulu-128,494, kwafa abazinkulungwane phose ezinhlanu-4,703.
Kunje sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye-3,696,379, asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kuCovid 19. Laba bantu bagoqela abayizigidi phose ezintathu-2, 757,486, asebehlatshwe amajekiseni womabili, njekokubika kwabogatsha lwezempilakahle.
Inhlanganiso eye#TheWalk isiqalile ukwamukela imali lokunye okuthunyezwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe okulabanye abathi sebekhathele ngokutshontshelwa imali yizihlobo, abangane labaqhatshwe ukuba benze inhlelo ezinjengokwakha izindlu kodwa imali bayitshayela esikhewini.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lowake wadlalela iqembu leHighlanders uMalvern Ntini, yena ohlala eMelika.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe le Zimbabwe emdlalweni kakhilikithi lizadibana lele United States of America emdlalweni walo wesibili owomncintiswano we ICC Women’s Cricket World Cup.
KuLivetalk namuhla kuhlelo “Diaspora Forum” sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe.